I-Sendwithus: Hlela, Vavanya kwaye ulinganise i-imeyile yokuNxibelelana | Martech Zone
I-Sendwithus: Hlela, Vavanya kwaye ulinganise i-imeyile yokuNxibelelana
NgoMvulo, Februwari 10, 2014 NgoMvulo, Februwari 10, 2014 Douglas Karr
Ukuba uliqonga elithumela ii-imeyile zentengiselwano, uya kufumanisa ukuba zinekhowudi enzima esiphelweni kwaye kunzima ukuzilungisa ngaphandle koncedo lomphuhlisi wakho. Ii-imeyile zokwenza izinto zi-imeyile zithunyelwa kubantu ukuba uneshishini kunye nabo kwaye abanakho ukuthotyelwa kolawulo (oko kuthetha ukuba abadingi khonkco lingabhaliswanga). I-imeyile yokutshintsha okanye yenkqubo ihlala ivulekile kwaye ucofe amaxabiso ke lithuba lokwenyani lokuthengisa kubathengi bakho ukuphucula ukugcinwa, ukukhutshwa okanye ukufundiswa.
Nantsi ukuhamba kweqonga labo:
Ukuba kuya kufuneka ubeke isicelo sokutshintsha kuyo yonke i-imeyile yangaphakathi, uya kubona ukuba izinto ziguga njani ngokukhawuleza okukhulu. Sendwithus liqonga elikhulu lonjiniyela lokudibanisa ii-imeyile ezinokuyilwa, zilawulwe kwaye zilandelwe ngaphandle kweso sicelo sotshintsho. Umphuhlisi wakho udibanisa nje i-Sendwithus API ukubiza i-imeyile elungileyo kwaye benza ezinye.
Sendwithus Iimpawu zeQonga
Uvavanyo lwe-A / B olwakhiwe ngaphakathi -Khawuleza uvavanye izimvo ezintsha kunye nomxholo.
Uhlalutyo -Linganisa ii-imeyile ezizisiweyo, ezivuliweyo, kunye namakhonkco acofa
Ukuhlela i-imeyile -Ukuhlaziya ngokulula ii-imeyile zakho zangaphandle kwinkqubo yakho.
Sendwithus idibanisa uninzi lweyona imeyile ixhaphakileyo kunye nokuthumela i-imeyile- SendGrid, Umpu weposi nguRackspace, Imandrill, Umlawuli kwaye Inkonzo ye-imeyile elula yeAmazon ngaphandle kwebhokisi.
tags: Inkonzo ye-imeyile elula yeAmazonimeyile eninziInkonzo ye-imeyile eninziUmlawuliUmpu weposiIposi yeposi ngeRackspacemandrillThumelasendwithusi-imeyile yentengiselwano
Sukungena kwi-Twitter. Sebenzisa ukuQiniseka kokuNgena!
Intengiso yedijithali kunye neempembelelo zeVidiyo